Bachitha eyamafa ngobulawe nendodana - Ilanga News
Home Izindaba Bachitha eyamafa ngobulawe nendodana
Bachitha eyamafa ngobulawe nendodana
Umndeni usola izimfamona ebezicikwa ‘yintuthuko yempilo kamufi’
UNKZ Mbalenhle Makhonza (38), odutshulwe wabulawa ngabantu abangaziwa elele nendodana yakhe, uManana Makhonza (14) (ekwesokudla)
ngeledlule ISITHOMBE: NGESIHE SOMNDENI
UYAYIHLABA eyombango wamafa umndeni wakwaMakhonza, ozifi-kele mathupha ema-hhovisi aleli phephandaba izolo ngoLwesithathu, uzochaza ngokwenzeka ngesikhathi kubulawa indodakazi yawo ngeledlule, edutshulwe yafa nendodana yayo ngabantu abangaziwa.
Umndeni wakwaMakhonza ugeqe amagula ngesikhathi uchaza kabanzi ngoNkz Mbalenhle Makhonza (38), obulawe nendodana yakhe, uManana Makhonza (14) ngeledlule eMagabheni, eMkho-mazi.
Abafi bahlaselwe belele emzini kaNkz Makhonza abesanda kuwakha. Kuthiwa ubesanda kungena kuwona, ehlala nendodana yakhe abulawe nayo nendodakazi kadadewabo esindile.
ILANGA libikile ngalolu daba ngeledlule, laveza ukuthi uNkz Makhonza ubulawa nje, kusolwa umbango wamafa.
Engxoxweni ekhethekile ILANGA elibe nayo noNkk Zengezi Makhonza, ongunina kamufi, uyichithile eyokuthi indodakazi yakhe kukhona ebibanga nabo amafa esoka layo elashona
“Empeleni indodakazi yami ibingashadile nesoka layo uMnu Njabulo Khumalo elishone ngonyaka ophelile ngemuva kokugula. Bese bethandane nalo isikhathi eside nathi sesilazi ekhaya.
“Belingakaloboli, besalinde ukuthi baqale bakhe umuzi wabo ngaphambi kokulobolana. Baqale ngokuthola isiza esibhalwe ngabo bobabili. Kuthe sebezoqala ukwakha, lashona isoka lendoda-kazi ngokugula. Lishona nje, bebe-ngenazo izingane, kuyindodakazi yami ebinezingane.
“Salingcwaba kahle isoka, indo-dakazi yami ibambisene kahle nomndeni wakwaKhumalo kubo wesoka. Sewudlulile umngcwabo, emsebenzini wesoka lakhe bacela amagama ohlu lwabantu abazo-hlomula emalini yalo yasemsebe-nzini kwaSappi, eMkhomazi, lapho beliqashwe khona.
“Saluhambisa uhlu lwamagama phakathi kwawo obekukhona ele-ndodakazi yami nelikanina kaNja-bulo,” kuchaza uNkk Makhonza.
Uthe imali igcine ibaphumele bonke ababebhaliwe, indodakazi yakhe yabe isiqala ukwakha umuzi wayo esizeni abasithenga nesoka.
“Ibulawa nje, ibisanda kuqeda ukuwakha umuzi wayo, sekusele izinto ezincane. Akekho umuntu obebanga amafa nendodakazi yami. Ubudlelwano bayo nabantu bakubo kwesoka layo bebubuhle ngendlela eyisimanga,” kusho uNkk Makhonza.
Uqhube ngokudwebela leli phephandaba isithombe ngabaku-bona ngesikhathi befika endaweni yesigameko, lapho okwabulawe-lwa khona indodakazi yakhe
“Sifike sathola ukuthi umuntu oyibulele, uzingenele ngomnyango akagqekezanga.
“Uyibulale ilele embhedeni wayo. Ibilele nengane yentombazane kadadewabo ebihlala naye. Indodana yakhe uManana bayidu-bulele ephaseji ngoba ibingalele nonina.
“Ababulali baqede ukumdubula bashaya bachitha nezikhiye zasendlini, amakhadi akhe amabili asebhange okuyiwona abewasebenzisa uma eyokhipha imali nomakhalekhukhwini wakhe.
“Omabonakude nezinye izimpa-hla ezibalulekile ezivame ukwebiwa uma kugqekezwa emizini yabantu, kazithathwanga,” kusho uNkk Makhonza.
Uthe akanalo ulwazi lokuthi bekukhona malini ebhange nje-ngoba ababulali bethathe amakhadi.
“Indlela ebulawe ngayo indoda-kazi yami, kuyacaca ukuthi ababulali ngabantu abasondelene nayo, abanomona, abebengakujabuleli ukuthi seyakhe umuzi wayo, baze bathatha namakhadi ayo asebha-nge,” kubalisa uNkk Makhonza ngokubulawa kwendodakazi yakhe.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembe-ka Mbhele, uthi amaphoyisa abe-ngakababambi ababulali.
Previous articleIsexwayiso sikaShenge kubaholi be-IFP komasipala
Next articleBelisongelwa ngokufa iphoyisa elibulawe ngoyaba lwezinhlamvu